Sahlanaa: Kooxda Elman oo la Wareegtay Cayaaryahan daadir Amiin | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Sahlanaa: Kooxda Elman oo la Wareegtay Cayaaryahan daadir Amiin
(17-11-2018) Kabtankii hore kooxda Banadir Sports Daadir Amiin cali (Daada) oo Sabtigii un shaaciyey in uu ka tegay Naadigiisa ayaa Saacado kooban kadib ka soo muuqdey kooxda Elman oo uu heshiis lagaaray.
Kadib ka tagisteysii kooxda Banadir waxey faa’ido u noqotay naadiga Elman, taa oo la soo saxiixatay xidigan oo ku wanaagsan ka ciyaarista garaba weerarka.
Cayaaryahan Daadir Amiin ayaa Elman u xiran doona Nambarka 7 aad kaas oo lagudoonsiiyey waxaana aan lashaacin qaabka ay ku qaadatay heshiiska inta Sano ee uu yahay iyo weliba Cadadka lacagta uu mushaar ahaan uga qaadan doono kooxdiisa Cusub waana Caado ay leeyihiin inta badan kooxaha Kubada Cagta Soomaaliya.
Daadir Amiin ayaa ka mid ahaa Cayaartoyda mudada dheer u cayaarayey kooxda Banaadir Sports si lama filaan ayuu Sabtigii u sheegay in uu ka tegay mana raacin wax sabab ah isla Sabtigiina waxa uu heshiis aan la ogeyn lagalay kooxda Elman.
Heshiiyada dhex mara Cayaartoyda iyo kooxaha kubada Cagta Soomaaliya ayaa wax badan aysan kala socon warbaahntu waxaan maqalnaa hebel ayaa ka tegay kooxdiisa hadana ku biirey Naadi hebel sida muuqata Sawirada aad u jeedaan waa kuwo lagu qaaday Tilifoon mana ahan kuwo tayo leh.